Archive du 20170707
Kaominina Antananarivo Renivohitra “Tsy maintsy hiaro tena izahay”
Misy ny antsirambina nataon’ny fitondram-panjakana foibe, tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakeky, izay nisian’ny filatsahan’ireo miaramila maro mirongo basy.
Fanaovana fitaovana politika ny tafika Nokianin’ny filohan’ny SMM
Naneho hevitra sy nanakiana ny sakantsakana ataon’ny fitondrana i Fanirisoa Herinaivo, filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM).
Fankalazana ny faha-15 taonan’ny TIM Mifanesisesy tonga ny avy any amin’ny faritra
Nanomboka efa tonga halina teto an-drenivohitra ireo solontenan’ny Tiako i Madagasikara avy any amin’ny faritra hanatrika ny fankalazana ny faha-15 taona niorenan’ny antoko rahampitso sabotsy.
Fanakanana ny hetsiky ny TIM Hanentana isam-pokontany ny Emmo reg
Nahazo alalana hampihatra ny fahefam-panjakana izahay, hoy ny avy eo anivon’ny CIRGN na ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Antananarivo, tarihin’ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka,
Tabera Randriamanantsoa « Avelao hiditra ao Mahamasina ny TIM »
Mampalahelo ny demokrasiantsika, hoy i Tabera Randriamanantsoa raha nivahiny tao amin’ny fahitalavitra TV Plus izy halina.
Firaisankina ho an’ny fanavotana an’i Madagasikara “Lozabe ny fijanonan’io fitondrana io eo !”
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny dia milaza ry zareo avy eo anivon’ny vovonana firaisankina ho an’ny fanavotana an’i Madagasikara tarihin’ny filoha mpiara-mitantana Manantsoa Victor sy Joseph Yoland fa lozabe ho an’ity firenena ity ny mbola hijanonan’ny fitondrana ankehitriny eo amin’io toerany io.
Ady amin’ny kolikoly Tsy ampy vola sy fitaovana ny Bianco
Sakana amin’ny fanatanterahan’ny Bianco an-tsakany sy an-davany ny asany momba ny ady amin’ny kolikoly ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny tetibola enti-miasa.
Nahavory olona marobe tokoa ilay hetsika “ Salon du bonheur et du bien être » nokarakarain’ny Kiss Madagascar tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely nanomboka omaly.
Tsy misy fanantenana intsony ny fitondrana Rajaonarimampianina na dia mbola mihevitra ny hitondra ny firenana ao anatin’ny 5 taona manaraka aza. Efa naman’ny manao tsipaky ny miala aina.
Lozam-pifamoivoizana tao Antsirabe Ilay mpamily mamo indray no nandrahona
Nitrangana lozam-pifamoivoizana vao maraina indray tao an-tanànan’Antsirabe omaly.
Aretina diabeta Mitombo isa hatrany ireo olona voany
Mitombo isa hatrany ireo olona voan’ny aretina diabeta eto amintsika, raha araka ny fanazavan’ny dokotera José, tompon’andraikitra eo anivon’ny AMADIA etsy Faravohitra.
Sekoly ambony Uprim Hiatrika ny fankalazana ny fahafolo taonany
Mankalaza ny fahafolo taona niorenany ny sekoly ambony UPRIM manana ny foiben-toerany etsy Andavamamba.
Fitsarana ny BEPC Nitokona ireo mpampianatra ao Antsirabe
Na nolazaina fa nilamina aza ny fanadinana BEPC tao Antsirabe dia farany vao nisy ventiny izany. Nitokona tsy nety hitsara ny laza adina mantsy ireo mpampianatra tokony hanao izany omaly tolakandro .
Rahalahin’ny depioten’Imanja Novonoin’ny dahalo omaly
7 lahy mirongo fiadiana mahery vaika no nanafika tao amin’ny tanàna antsoina hoe Andohambe, ao amin’ny distrikan’Imanja omaly maraina.